बौद्व धर्मको उत्थानमा महिला संघ-Nagarikaawaj.com
बौद्व धर्मको उत्थानमा महिला संघ
नागरिक आवाज/२९ भदौ,बुटवल ।
बौद्व महिला संघले रजत महोत्सवको अवसरमा बुटवलमा गोष्ठि गरेको छ । बौद्व धर्मको उत्थानमा महिलाहरूको भूमिका बिषयक महिला गोष्ठि गरिएको हो ।
सो अवसरमा बुद्धको समयमा बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, कला र सस्कृतिको संरक्षणमा महिलाहरुको अतुलनीय भूमिका रहेको चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा बौद्ध ज्ञानका विक्षुणी डा. अनोजा गुरुङ, प्रदेश ५ का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गोमा आचार्यले बोल्दै बुद्धले समानता र सहअस्तित्वको रक्षाका लागि दिइएका सन्देश अनुकरणीय रहेको बताएका थिए ।
गोष्ठिमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक डा. शारदा पौडेलले बैदिक कालमा महिलाहरुलाई धार्मिक रुपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै बुद्धले महिलाहरुलाई सामाजिक कार्यमा सरिक हुन प्ररेरित गरेको बताईन ।
कार्यपत्रमाथि वजिर भन्ते, लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका पूर्व क्याम्पस प्रमुख इन्द्र काफ्लेले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्य, पद्म चैत्य विहार वुटवलका अध्यक्ष सुरेशरत्न ब्रज्राचार्य, संघका अध्यक्ष मायादेवी शाक्य, सहसचिव निरुलक्ष्मी ब्रज्रचार्य लगायले बोलेका थिए ।
बौद्ध महिला संघले शुक्रबार सुस्त मनस्थितिका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्रि वितरण र भदौ ३० गते विपश्यना ध्यान विहार गरिने छ ।
रजत महोत्सवको आगामि भदौ ३१ गते ¥याली सहित मूल समारोह गरिने संघले जनाएको छ । मूल समारोहलाई प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रि शकंर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहने आयोजकले बताएका छन ।